Ku biir kooxda kooxda Element Society (boga shaqadeena) (ku dar shaqooyinka NCS)
Ma jeceshahay in aad la shaqeysid dhalinyarada oo aad aragto iyaga oo guuleysanaya? Kadibna codso inaan ku biirno kooxdayada!
Marka aad ka shaqeyneyso Element Society waxaad ka caawineysaa dhalinyarada in ay gaaraan kuwa aan la rumaysan karin, waxaad awood u siineysaa dhalinyarada inay bedelaan bulshadooda, waxay kor u qaadaan rabitaankoodii oo ay noqdaan kuwa ku dayasho u leh asxaabtooda.
Element Society waa urur samafal oo diiwaangashan (lambar: 1157932), shirkad diiwaangashan oo xadidan dammaanad (lambar: 08576383) iyo bixiye waxbarasho oo diiwaangashan (UKPRN: 10047367).
Element Society waxay ka go'an tahay ilaalinta carruurta iyo dhallinyarada.
Element Society waa sinaan loo siman yahay.
Ma waxaad tahay qof shakhsi ah oo jecel inuu sameeyo isbeddel?
Khibradaha nololeed ee beddelaya NCS ma noqon doonto mid aan suurtogal aheyn iyada oo aan loo marin shaqooyinka adag ee shaqaalaheenna ilbixinta.
Waxaad noqon kartaa qayb ka mid ah dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee cajiibka ah. Shaqaalahayaga xilliyeed waxay joogaan wadnaha NCS, waxaanan ku faraxsanahay kumanaan dad ah oo dhiirigeliya, hogaaminaya kuna dhiiri gelinaya dhalinyarada inay safarka NCS ku yimaadaan. Guulaha NCS ma noqon doonto suurtogal la'aan iyada oo aan la jecelnahay iyo nacaybka kooxdayada kooxda NCS xilligeena.
Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah doorarkan fadlan soo qaado dukumiintiyada hoosta ku yaal oo foomka codsiga u soo dir foomka NCS Team at - ncs@elementsociety.co.uk
Foomka Codsiga Shaqada
DHAMMAAN DHIBAATOOYINKA DHAMMAAN
Waxaan rabnaa in aan la shaqeyno shakhsiyaadka dhiirigeliya taageerida dhalinyarada si ay u gaaraan kuwa aan la rumaysan karin.